एक्रिलिक पाना निर्माता र आपूर्तिकर्ता - चीन एक्रिलिक पाना कारखाना
एक्रिलिक Plexiglass कट-टू-आकार पानाहरु, पूर्ण पानाहरु, वा मानक आधारभूत आकार मा उपलब्ध छ। Plexiglass पाना एक ग्लेजिzing, signage, छींक गार्ड, सञ्झ्याल वा प्रदर्शन सामग्री हो कि बलियो छ, नमी प्रतिरोधी र गिलास भन्दा स्पष्ट छ। Plexiglass अप्टिकल स्पष्टता को हानि बिना गर्मी को गठन हुन सक्छ। यी एक्रिलिक पानाहरु किफायती, प्रभाव प्रतिरोधी छन् र परिशुद्धता आकार मा कटौती गर्न सकिन्छ। यदि तपाइँ plexiglass आवश्यक छ, होम डिपो वा Lowes भ्रमण नगर्नुहोस्, एक "पेशेवर" कल गर्नुहोस्। हामी कटौती गर्न को लागी आकार र plexiglass को जहाज पानाहरु सीधा तपाइँको ढोकामा।
Plexiglass पानाहरु आकार र मोटाई को एक विस्तृत श्रृंखला मा आउँछ। एक्रिलिक पाना को विशेषताहरु मा शामिल छ: स्थायित्व, स्पष्टता, लगातार गुणस्तर, बहुमुखी प्रतिभा, मौसम प्रतिरोध, हल्का र सुरक्षा, यूवी प्रतिरोध, रासायनिक प्रतिरोध र उत्कृष्ट प्रदर्शन। एक्रिलिक पानाहरु उत्कृष्ट प्रकाश प्रसारण छ - गिलास भन्दा स्पष्ट! यो लामो समय सम्म सूर्य को संपर्क पछि पहेँलो हुनेछैन।
स्क्र्याच प्रतिरोधी plexiglass उच्च सतह कठोरता, खरोंच प्रतिरोध संग plexiglass लाई जनाउँछ। भौतिक गुणहरु, मेकानिकल गुणहरु, र मौसम प्रतिरोध लगभग साधारण plexiglass को रूप मा एकै हो। सतह कठोरता उच्च, खरोंच प्रतिरोध, खरोंच प्रतिरोध, र रासायनिक जंग प्रतिरोध छ।
1. सही पारदर्शिता र 93%संग प्रकाश transmittance।
2. उत्कृष्ट बिजुली इन्सुलेशन, वजन मा धेरै हल्का।
3. उच्च plasticity, प्रशोधन र सजिलो आकार।
4. बलियो सतह कठोरता र राम्रो मौसम प्रतिरोधी सम्पत्ति
5. रंग मा सुन्दर, सफा गर्न को लागी सजिलो
1. उपभोक्ता सामान: सेनेटरी वेयर, फर्नीचर, स्टेशनरी, हस्तशिल्प, बास्केटबल बोर्ड, प्रदर्शन शेल्फ, आदि
2. विज्ञापन सामग्री: विज्ञापन लोगो चिन्ह, संकेत, प्रकाश बक्स, संकेत, संकेत, आदि
3. निर्माण सामाग्री: सूर्य छाया, ध्वनि इन्सुलेशन बोर्ड (ध्वनि स्क्रीन प्लेट), एक टेलिफोन बूथ, एक्वैरियम, एक्वैरियम, भित्री पर्खाल पाना, होटल र आवासीय सजावट, प्रकाश, आदि
4. अन्य क्षेत्रहरुमा: अप्टिकल उपकरण, इलेक्ट्रोनिक प्यानल, बीकन प्रकाश, कार पूंछ रोशनी र विभिन्न वाहन विंडशील्ड, हस्तशिल्प, उत्कीर्णन, साइन बोर्ड र खेलौना आदि।
उच्च गुणस्तर स्पष्ट एक्रिलिक प्यानल
एक्रिलिक प्यानल बकाया शक्ति, कठोरता, र अप्टिकल स्पष्टता संग एक पारदर्शी प्लास्टिक सामग्री हो। एक्रिलिक पाना प्रदर्शन गिलास जस्तै गुणहरु-स्पष्टता, प्रतिभा, र पारदर्शिता-तर आधा तौल र धेरै पटक गिलास को प्रभाव प्रतिरोध मा।
स्पष्ट एक्रिलिक पाना ACRYLIC हो, सामान्यतया "विशेष गरी उपचार गरिएको plexiglass पाना" को रूप मा जानिन्छ। उनी एक रासायनिक सामग्री हुन्। रासायनिक नाम "PMMA" हो, जो propylene रक्सी संग सम्बन्धित छ। आवेदन उद्योग मा, एक्रिलिक कच्चा माल सामान्यतया कण, प्लेट, पाइप, आदि को रूप मा देखा पर्दछ।
उच्च पारदर्शी एक्रिलिक पाना
स्पष्ट एक्रिलिक पानाहरु उत्कृष्ट पारदर्शिता छ, क्रिस्टल स्पष्ट पछि पोलिश, 93.4%सम्म प्रकाश transmittance। उच्च प्रकाश र विदेशी मामिला बिना चिकनी सतह; लुक्ने र सुस्त बिना राम्रो मौसम प्रतिरोध र तापमान प्रतिरोध;